Abalị Na-atụ Egwu ga-akwụsị ozugbo. Ihe a niile mebiri - Thrilltalk.com
Home/Nieuws/Abalị Na-atụ Egwu ga-akwụsị ozugbo. Ihe a niile mehiere
0 29 Ejiri 2 gụọ
Walibi Holland ozugbo na-adọta plọg na Halloween a ma ama Abalị Na-atụ Egwu. Ogige ahụ na-egosi na enwere ọtụtụ corona nha ndị ọbịa mebiri ya na ogige ahụ nwetara nsogbu ole na ole. Dị ka ogige ahụ si kwuo, nke a ga-abụ ihe kpatara na a kwụsịrị ihe omume ahụ ozugbo. Anyị gwara ndị ọrụ okwu na menye ụjọ ndị na-eme ihe nkiri na-ewetara a dị iche iche akụkọ.
Abalị na-atụ ụjọ nke ukwuu
N'ehihie n'oge mbipụta ụmụaka 'ụbọchị ndị na-asọ oyi' ihe niile dị ka ogige a haziri nke ọma, mana ka ehihie na-aga n'ihu mbipụta nke mgbede, nsogbu na-arịwanye elu bịara pụta ìhè. Ọ ghọrọ ọrụ oke ọrụ na ogige n'ihi na enyere ọtụtụ ndị ohere. Ogige ahụ kwuru na mbụ banyere ikike nke ihe ngosi nke otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ikike nkịtị, nke ga-ewe ihe dịka ndị ọbịa 9.000. Nọmalị ogige na-enye ohere maka ndị ọbịa 24.000.
Ndị ọrụ nọ na ihe nkwenye na-ekesa na soshal midia: Walibi anabatala ọtụtụ ndị ọbịa. Vidio na ihe nkiri na-egosi n’ụzọ doro anya na ụzọ karịrị akarị. Mgbe igwe ojii dara n’elu ogige ahụ, onye ọ bụla gbalịrị izochi. Nke a kwụsịrị ogige ahụ n'ihi na ndị ọzọ nọkọtara ọnụ.
Emechiri ebe 'Alice' na 'Firepit' dị na ọha, na-eme ka ọtụtụ mmadụ banye n'okporo ụzọ. N'ikpeazụ, e nwekwara ndị nyocha si mpaghara nchekwa na ogige ahụ na-enweghị obi ụtọ na ihe ha hụrụ.
Ndị egwu na-atụ ụjọ na-ewe iwe Walibi
iche iche menye ụjọ ndị na-eme ihe nkiri adighi enwe obi uto na ogige. Otutu menye ụjọ ndị na-eme ihe nkiri wee pụọ n'iwe n'ihi na echekwaghị nchekwa maka ndị ọrụ na ndị ọbịa n'ụzọ kwesịrị ekwesị, otu ihe kpatara ìgwè mmadụ ahụ. Ha egosila na ogige ahụ na ha achọghị ịlaghachi ruo mgbe edozila ya.
Ọtụtụ ọdịda agaghị abụ ihe kpatara mmechi ahụ, ka onye na-eme ihe nkiri kwuru nke na-anọgide na-amaghị nke ọma onye ọcha. “Walibi ekwughị eziokwu banyere ọnọdụ ahụ bilitere ụnyaahụ. Enwere arụ ọrụ, mana nke ahụ abụghị ihe kpatara ya. Ogige ahụ ahọrọla gọọmentị; ma ị ga-ekpochapụ Halloween ma ọ bụ anyị mechie ogige ahụ ozugbo.
Ndị na-eme ihe nkiri na-atụ ụjọ ndị na-esiteghị na mpaghara ogige ahụ agbaala ụlọ n'ụlọ ezumike ezumike dị nso. Dị ka nke a menye ụjọ ndị na-eme ihe nkiri ha enwetaghị nke ọ bụla akwụ ụgwọ ma ọ bụ nkwụghachi ụgwọ si Walibi Holland.
Anyị gwara Walibi ka ọ zaa ajụjụ a. Ruo ugbu a, anyị anataghị azịza, ozugbo nke a bịara, anyị ga-eziga ya ebe a.
ndị ọbịa ikike nha Walibi Holland
Corona na-atụrụ ndụ na ogige ntụrụndụ
Ihe nkiri Park Park na-eme ememme Halloween Horror na usoro corona